Imitapo namuhla - akusiwona nje omkhulu incwadi esitolo, kodwa futhi ulwazi izikhungo. umtapo Krasnodar kungenziwa ngokuthi Nethempeli Literature, Namasiko. Ungakwazi simazi kangcono amabhuku amasha, ukusebenza kwi-computer, vakashela recital ithalente lasekhaya. Esikhathini Ukubuyekeza sipho esisha ukuthola ukuthi yini umtapo has enhloko-dolobha ye-Kuban, bangaphi labo abakumangalelayo?
Library Wezingane yaqanjwa Brothers Ignatov
abafundi abasha bayokwazisa lo mtapo wolwazi Krasnodar. It ingenye izikhungo ngobukhulu izingane eRussia. izimali zayo zafakwa endaweni eyodwa square kilometre, kuyilapho inani labantu okufanele abafundi ingaphezu 30 eziyinkulungwane abantu!
By the way, ukuzwa kukhulunywa ngezintaba lokuqala igama abazalwane umtapo Ignatov ezitholakala imibhalo ephathelene 1933. Khona-ke endaweni yayo lalilincane kakhulu, kodwa abafundi - kabili! Ngo-1959, i-Library "wathuthela" esakhiweni lapho likhona kuze kube yilolu suku - Red emgwaqweni, 26.
Library Wezingane yaqanjwa Vitaly Borisovich Bakaldina
Enye umtapo Krasnodar ngoba Bookworms abasha emgwaqweni we Communards, 201. It ubhekwa yaba isikhungo sawo samasiko nokungcebeleka. Yavula ngo-August 1976. Namuhla, incwadi Isikhwama has mayelana 70 000 nezincwadi. Ngonyaka odlule umtapo wavakashelwa abafundi angaba yizinkulungwane 53!
Library Youth yaqanjwa Ivana Fodorovicha Varavvy
Ukuze abafundi asebekhulile umtapo Krasnodar yaqanjwa imbongi, hero ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, nomshikashika iqhawe Kuban. It yasungulwa ngo ehlobo lika-1980.
Ukuze abafundi abasebasha kukhona izincwadi ezingaphezu kuka-180 eziyinkulungwane - ezinyathelisiwe, electronic, nezilalelwa zibukelwe! Ngaphezu kwalokho, imali zide. Isibalo abafundi namuhla abantu abayizinkulungwane 24, kuyilapho inani labantu okufanele ukuvakashela umtapo - ezingaphezu kuka eziyinkulungwane 150. Lapha ligcinwe njalo ngonyaka izenzakalo okungenani 500. Okubukwe kakhulu - Biblionoch, Decade izincwadi Orthodox, Night Ubuciko. Lokhu umtapo ingaphandle Officers, 43.
igama Library Aleksandra Sergeevicha Pushkina
Kuyini Library of Pushkin e Krasnodar? Kuyinto isikhungo omdala wonke esifundeni. Yavula ngo-1900! Izimali sethempeli izincwadi ezingaphezu kwesigidi izincwadi. Lezi izincwadi, omagazini, amaphephandaba, amarekhodi. I eyigugu kakhulu izinto - edishini zangaphambi wamavukelambuso. Kukhona amabhuku nge Autographs of abalobi ezidumile futhi izimbongi we Kuban.
Thola leli bhuku esigodlweni - ilula: kuba emgwaqeni Red, 8. Ngaphambi emnyango eyinhloko lesikhumbuzo ukuze imbongi, ogama lakhe isikhungo okuthiwa.
igama Library Antona Pavlovicha Chehova
Incwadi Umhlaba Blind Krasnodar inikeza umtapo esiyingqayizivele yaqanjwa laseChekhov, sise Gavrilova emgwaqweni, 87. Lesi sikhungo inikeza izincwadi ekhethekile ongaboni kahle futhi abantu abayizimpumputhe. Kukhona amabhuku eyenzelwe ochwepheshe abasebenza emkhakheni yobumpumputhe isinxephezelo: abasebenzi Correctional izikole, odokotela.
Phakathi abasebenzisa lo mtapo wolwazi Krasnodar cishe 6500 abakhileyo Kuban. Laba abantu bobudala obungefani, nemikhakha ehlukene yokukhubazeka. Ngokwesilinganiso, njalo ochwepheshe ngonyaka ngahlola amabhuku ecishe ibe yizinkulungwane 400. Ngaphezu kwalokho, kukhona aphethwe imicimbi yamasiko - okungenani ezimbili ezingaba yinkulungwane ngonyaka!
Library okuthiwa Nikolaya Alekseevicha Nekrasova
Omunye imitapo ethandwa kakhulu e Krasnodar - Central City Library iqanjwe Nekrasov. Ngokokuqala ngqá e imibhalo ingabe okukhulunywa ngo-1923. Ekuqaleni, lapho esebenza izisebenzi ezimbili kuphela. Khona-ke incwadi Isikhwama bezingaphansi izihloko kancane engaphezu kwezinkulungwane ezine, futhi Izivakashi kwakuye kube kuka kancane kubantu abayinkulungwane.
Namuhla umtapo Nekrasov (Krasnodar) - elihle incwadi iqoqo, yesimanje Ukufundwa amakamelo, isikhala ukusebenza amakilabhu ikhompyutha. izimbongi luthela uyokwazisa nawe okwamanje lezi ziyingi inkondlo! Vakashela yokudlela abakhileyo angaba yizinkulungwane 15.
I emangalisayo Dolgoprudnenskoe emathuneni
Kusukela esebenzisekayo eziyingozi isinyathelo esisodwa